Ski Goggles Jereo hoe rahoviana ary ny antony tokony hampiasanao azy ireo! - ULLER
ANDRIAMANITRA 2X1 INDRINDRA - CODE: 2X1YA
Poakaty ny kodiaranao
Manohy fivarotana →
firosoana / Vaovao
Ski Goggles Jereo hoe rahoviana ary ny antony tokony hampiasanao azy ireo!
Septambra 18, 2020
Fahalalana sy fahalalana
TOKONY TOKONY HATAO NY GOGGLES SKIAKO VE IZAO?
Raha manontany tena amin'ny tenanao ianao dia ENY ny valiny! Tsy misy isalasalana fa ny ski dia nanjary fitovizan'ny fientanam-po, adrenaline ary fialamboly.
El Ski Izy io dia heverina ho iray amin'ireo fanatanjahan-tena amin'ny lanezy sarotra indrindra sy mahafinaritra indrindra, satria manana karazana fomba maro, fitsambikinana, pirouette ary fika mahafinaritra izy io ary mamela tsy miteny intsony ny iray. Fa toy ny fanatanjahan-tena mampientanentana rehetra dia mila mitondra ny fitaovana ilaina rehetra foana ianao ... Fantatrao ve ny antony tokony handraisanao tsara hatrany solomaso ski miaro rehefa manao io fanatanjahan-tena io ianao?
Ento ny fitaovana feno amin'ny fanatanjahantena an'ny Ski amin'ny fomba maodiny rehetra dia ilaina amin'ny fanatratrarana ny tanjontsika, ao anatin'izany ny solomaso ski. Ary ny hazavana any amin'ny faritra misy lanezy dia avo dia avo, indrindra amin'ny ririnina, satria ambany kokoa ny toeran'ny masoandro any an-danitra, ary ny tara-masoandro dia milatsaka miaraka amin'ny fironana mitaratra, izay niafara tamin'ny fanimbazimbana ny fahasalaman'ny masontsika. . Ankoatr'izay, rehefa miasa isika, miaro ny tenantsika amin'ireo singa sy rivotra misy lanezy rehefa ilaina ny manao ski ambony mba hahazoana antoka fahitana tsara rehefa manao ski.
IZA AN'NY ANJARA SKI NO TOKONY HIFIDIKO?
Diniho ity vera an'ny SkiTokony hanaraka ny fenitra ISO izy ireo mba hiarovana tsara anao amin'ny taratra masoandro. Izy ireo koa dia tsy maintsy eken'ny CE ary manaraka ny fenitra fiarovana Eropa. Toy izany koa, zava-dehibe ny hifanarahan'izy ireo tsara amin'ny tavanao, ao anatin'izany ireo faritra eo an-tsisiny. Tsarovy izany vera an'ny Ski Tsy hiaro ny masonao amin'ny taratry ny masoandro fotsiny izy ireo fa hanampy anao hanao fampisehoana rehefa manao ski satria hanatsara ny fahaizanao mijery sary.
Ataovy ao an-tsaina izany amin'ny fotoana hisafidiananao ny anao gafas ny ski, raha ny marina dia tsy hitovy lanja ny rehetra, ary mainka fa raha mividy azy ireo amin'ny magazay tsy nahazo alalana na eny an-tsena an-dalambe ianao. Tsy misy an'izany! Ny tolo-kevitra dia ny hividy ny solomaso ski any amin'ny magazay ara-batana na fivarotana an-tserasera izay manome anao safidy sy maodely misy fenitra faran'izay tsara kalitao, ary fitaovana sy kristaly mety indrindra.
Ny fananana fahitana tena tsara rehefa milalao fanatanjahan-tena amin'ny lanezy dia manome antoka ny fivezivezena sy ny fahitana lavitra kokoa. Noho izany dia ilaina ny mifidy ny solomaso ski manitsy izay mifanaraka amin'ny ilainao.
Tsy maintsy misafidy foana ianao solomaso ski miaraka amin'ny fiasa ara-teknika avo lenta izay miantoka ny fahombiazana, ny fahaleovan-tena ary ny fivezivezena tsara kokoa rehefa manao ski amin'ny toe-javatra faran'izay mafy. Ny tsara indrindra dia ny mampiasa vola amin'ny kalitao raha ny resaka vera an'ny Ski, ary mifidiana vokatra avo lenta. Tadidio fa tsy midika akory izany hoe mividy sarontava lafo indrindra, fa ireo izay mifanaraka indrindra amin'ny zavatra ilainao.
INDRINDRA INDRINDRA NY CATOGORIASA SKI GOGGLES LENSES AO?
Misy sokajy sivana isan-karazany amin'izao fotoana izao ao anaty lantom-bokin'i vera an'ny Ski, manomboka amin'ny CAT0 ka hatramin'ny CAT4. Ny isa isaky ny sokajy dia manondro ny maizina amin'ny mason-tselika sy ny habetsaky ny tsiranoka omena azy ireo. Raiso an-tsaina fa tsy mitovy amin'ny fandraisan'ny taratra taratra tariby izay miaro azy amin'ny fiarovana UV400.
CAT0 no tena mifoka kely indrindra (saika mangarahara ireo), ary ny CAT4 no tena mifoka (ho hitanao fa tena maizina izy ireo). Ny zavatra mahazatra dia raha tsy manana areti-maso manokana ianao dia ireo izay hampiasainao indrindra dia ny sokajy 1 sy ny sokajy 3 mampihatra Ski na snowboard.
Category 0: Saika kristaly mangarahara izy ireo ary sivana fandefasana hazavana hatrany amin'ny 80% ka hatramin'ny 100%. Izy ireo dia mety tsy misy loko na manana loko malefaka be. Naseho ho fampiharana izy ireo Ski amin'ny alina na aloha be alohan'ny fiposahan'ny masoandro. Amin'ny andro feno rahona na miaraka amin'ny mety hisian'ny tafio-drivotra.
Category 1: Ny sivana fandefasana hazavana avy any 43% ka hatramin'ny 80%. Volomaso misy loko malefaka izy ireo, mety ampiasaina raha ahena ny fahazavana ary hisorohana ny tsy fahazoana aina amin'ny famirapiratana ivelany loatra amin'ny toe-javatra rehetra.
Category 2: Maizina antonony izy ireo. Ny sivana fandefasana hazavana avy amin'ny 18% ka hatramin'ny 43%. Izy ireo dia aseho mandritra ny andro mazàna fahazavana.
Category 3: Ny sivana fandefasana hazavana avy any 8% ka hatramin'ny 18%. Manana loko mainty izy ireo, ampy hahatsapana ho mahazo aina amin'ny masoandro, indrindra amin'ny fotoana tampony. Manome haavo haavo lavorary ho an'ny fampiharana ara-panatanjahantena izy ireo any an-tokotany, izay miova ny hazavana avy any antonony ka hatramin'ny mahery.
Category 4: Ny sivana fandefasana hazavana avy any 3% ka hatramin'ny 8%. Izy ireo no maizina indrindra amin'ny sokajy rehetra ary ny sivana fandefasana hazavany dia 3% ka hatramin'ny 8% ihany. Ampiasaina izy ireo amin'ny toe-javatra misy ny famirapiratana toy ny hoe tsy ampy ho an'ny mpanao ski ny lantera CAT3.
Torohevitra hisafidianana ny vera SKI INDRINDRA
Fiarovana ny maso dia tena ilaina amin'ny mpanao ski rehetra. Tadidio fa ny gafas ny ski Tokony hanana fiarovana 99% na 100% foana izy ireo hiarovana anao amin'ny taratra.
Hamarino tsara fa manana izy ireo Fiarovana UV-400,satria ny sivana dia hiaro anao amin'ny taratra UVA sy UVB. Ka ny anao solomaso ski hosakanany tsara ny taratra ultraviolet an'ny masoandro, miaraka amin'ny halavan'ny halavan'ny halavan'ny 400 nanometatra.
levitravera an'ny Ski miaraka amina lantira maivana azo ovaina. Hamela anao hampiasa solomaso lavorary arakaraka ny toetrandro sy ny hazavana izay ahitanao ny tenanao. Ahoana? Azonao atao ny misafidy sy manova ny sokajy ny solomaso amin'ny hodinao satria mety aminao avy hatrany.
Misafidiana solomaso Ski miaraka amin'ny "Antifog" na "rafitra Antifog". Hanampy anao hisoroka ny asan'ny zavona izany.
Misafidiana solomaso avy Ski miaraka amin'ny rafitra rivotra anatiny. Ny sarontava miaraka amin'ny haitao fanefitra ihany no hamela ny famerenan-drivotra miandalana ary hanome antoka ny fahitana tsaratsara kokoa.
levitra vera an'ny Ski mifanaraka tsara amin'ny tarehy sy tarehyo. Tsy maintsy manana tadiny fanitsiana anti-slip izy ireo mba hametahana tsara ny lohanao sy ny fiarovan-doha.
Mitadiava solomaso ny ski fahazavana. Ny fitaovana misy dia polyurethane thermoplastic, izay manome kalitao avo indrindra sy fahazavana.
MIANATRA bebe kokoa momba ny SKI sy ny fomba maodely indrindra!
Raha manomboka manao ski ianao, dia mety hatahotra kely, ary mbola zatra mandeha an-tongotra amin'ny lanezy na mitondra ny fitaovana rehetra eny an-tànanao. Hamarino tsara fa amin'izao fotoana izao dia manana fanajana sy fitandremana be ianao haka ny hafainganana. Aza matahotra fa tonga lafatra ny fampiharana! Izany dia ny fananana fanoloran-tena be, toe-javatra tsara ary be dia be, fanahin'ny fientanam-po. Ho fotoana kely fotsiny vao ho voajanahary tanteraka aminao ny mitafy ski, raiso ny solomaso ski, ary fenoy adrenalinina ianao rehefa manao ski.
Tsy isalasalana ny SkiIzy io dia iray amin'ireo fanatanjahantena sarotra indrindra sy feno amin'ny rehetra, ary noho io antony io dia manana fomba maro hampiarana sy hankafizany azy io. Na dia misy sokajy sy karazany maro karazana Ski io fanovana isaky ny faritra io dia azo lazaina fa ny modely ski Ny malaza indrindra dia ny: skiing alpine, ski an-tsambo, ski an-tsambo, ski an-tsokosoko, ski ambony haingam-pandeha ary fanaovana ski tsy andoavam-bola. Vakio hatrany ary ianaro bebe kokoa momba azy ireo!
Alpine Skiing dia manana ny anarany Alpes, ilay faritra nanombohana nanombohana azy tamin'ny voalohany. Izy io dia iray amin'ireo endrika fanatanjahan-tena mahazatra sy malaza indrindra, ary noho io antony io dia fantatra tsotra amin'ny hoe "ski". Miorina amin'ny fidinana miaraka amin'ny ski amin'ny lanezy manaraka ny làlana misy marika amin'ny manga sy vavahady (vavahady), eo amin'ny tehezan-tendrombohitra mideza mandritra ny fotoana fohy indrindra.
Ny fomban'ny Skiing Alpine
fihenan'ny: fifaninanana mandritra ny telo andro, ny farany dia fitsapana iray hafainganam-pandeha.
Slalom na Slalom: zotra fohy misy vavahady maro no zaraina eny an-dalana (eo anelanelan'ny 55 sy 75) miaraka amin'ny halavirana 75cm sy 15m eo anelanelany. Ny fihodinan'ity làlana ity dia tery ary somary manahirana; tian'ireo manam-pahaizana.
Giant Slalom: Taranaka 2 no vita isaky ny lalana; mila ny skier hanana traikefa be amin'ny fametahana haingam-pandeha. Ny isa kely indrindra amin'ny fotoana roa amin'ny fidinana dia manambara ny mpandresy. Io fomba io dia mampihena ny elanelana misy eo am-baravaranao ka hatramin'ny 5m farafaharatsiny. Io fomba io dia mampihena ny isan'ny vavahady raha ampitahaina amin'ny Slalom mahazatra.
Super Giant Slalom (Super G): Ity modality ity dia mampifangaro ny hafainganana amin'ny fahamendrehana sy ny hakingana, ary nanjary razambe tokana izy io. Izay mahavita manao azy ao anatin'ny fotoana fohy indrindra dia izy no mpandresy.
mifanindran-dàlana: Izy io dia misy fidinana roa miaraka amin'ny lalana fohy. Mampientam-po tokoa ny fanaovana ski parallel satria ny mpandresy no voalohany miampita ny tsipika fahatongavana.
atambatra: Manana faritra roa izy io, ny iray ho an'ny slalom ary ny iray ho an'ny fidinana ambany. Mila teknika mazava tsara sy hafainganam-pandeha lehibe kokoa noho ny ambiny. Amin'ity tranga ity, ny mpifaninana izay manome isa ny ambany indrindra amin'ny fotoana roa farany azony dia lasa mpandresy.
El ski Alpine dia ny fomba fanao ski mahazatra indrindra Ary azo antoka fa izany no antony nanombohanao na hanombohanao amin'ity fanatanjahantena ity. Ataovy ao an-tsaina fa fombafomba tsy tokony hataonao izany raha tsy manana ny fitaovana sy ny fitaovana tsara ianao solomaso ski.
SKI-TANORA SKI / SKY NORDIKA
Izy io dia fantatra ihany koa amin'ny fanaovana ski ski Nordic, ski an-tsambo na ski-cross-country. Izy io dia mitaky fandehanana lavitra amin'ny hafainganam-pandeha avo indrindra amin'ny fotoana fohy indrindra, amin'ny tany tsy miovaova, amin'ny lembalemba na amin'ny lemaka antonony. Ireto ny maodelin'ny ski ski Nordic:
Ski Nordic kilasika
Ski Skate Nordic
Ny ski an-tsambo dia manambatra ny ski ski amin'ny alàlan'ny tendrombohitra, ary tsy atao amin'ny faritra misy marika na voaomana. Ny toe-batana tena tsara dia ilaina amin'ny fampiharana azy, na amin'ny fiakarana na amin'ny fidinan'ny tendrombohitra. Amin'ity fomban'ny Skina ny fiakarana na ny fidinana dia atao fitsangatsanganana.
Freeride dia endrika iray Ski tsy mampino izay vita ivelan'ny piste, ary natao manokana ho an'ny mpitaingina miaraka amin'ny fanahy afaka. Tsy manaraka làlana voafaritra io, ary noho izany dia afaka misafidy izay hifindra ny skier. Ity miavaka ity dia mampientanentana azy indrindra satria mandeha amin'ny làlantsika manokana isika, ary mankasitraka ireo velaran-tany amin'ny fomba hafa sy tsy manam-paharoa. Ampiasaina any an-tendrombohitra virijina izy io, izay misy lanezy vovoka, tehezana be ary sakana voajanahary, noho izany dia misy risika sasany sy adrenaline be dia be ao amin'ilay hetsika. Freeride dia fomba maoderina natao ho an'ireo mpanao ski manana traikefa betsaka amin'ny fanatanjahantena.
Heverina ho iray amin'ireo endrika mahavariana indrindra an'ny Ski.Ny mpanao ski dia manao tohotra, fitsambikinana ary pirouette marobe rehefa mampihatra an'io fomba fanao io. Tany am-boalohany dia natao ho endrika mahafinaritra, fa lasa fanatanjahantena lanezy ekena izao. Ahitana mitsambikina sy sakana avo (lavaka sy dongona) hanatanterahana ny fiakarana. Ny fomba fanao amin'ny freestyle na freeski dia:
SPEED / KILOMETER NISORATRA SKI
Izy io dia misy fidinana midina mankany amin'ny haingam-pandeha mety indrindra amin'ny lalana 1km natao ho an'ny fanatanjahan-tena. Ny zavatra mahazatra dia ny mpanao ski hafainganam-pandeha mihoatra ny 200km / h ary mazàna dia mitafy akanjo vita amin'ny polyurethane na latex ary mitafy fiarovan-doha aerodynamika, andry miondrika na mirona farafahakeliny 1m, ary ski manana 2.4m lehibe indrindra amin'ny halavany 10cm. El Ski hafainganana dia endrika fanatanjahantena izay Nanjary nalaza tamin'ny taona 1930, tamin'ny fifaninanana natao tany Saint-Moritz (Suisse), na dia tsy heverina ho fifehezana fanatanjahantena sokajy sokajy olympika aza izy io ankehitriny.
Ankehitriny fantatsika bebe kokoa momba ny fomba fanao ski y inona ny solomaso ski tsara indrindra Azonao atao ny mividy ho an'ity fanatanjahantena ity, miha manakaiky kokoa ny fivoahana ianao ary mankafy ny hetsika amin'ny lanezy satria tena mendrika izany ianao. Aza adino fa ny fanatanjahan-tena tafahoatra dia mitaky fanomanana ara-batana sy ara-tsaina betsaka ary koa ekipa fanatanjahan-tena tsara indrindra.
Mampiasà be dia be ary miomàna tsara hiatrika zava-tsoa miaraka amin'ny zavatra tsara solomaso ski amin'ny fomba maodiny rehetra!
Ireo no fotoana 5 tokony hitondranao ny solomaso misy lanezy
Tena ilaina ny manao saron-tava tsara rehefa manao fanatanjahan-tena tafahoatra amin'ny lanezy. Mahatsapa ve ianao fa vonona ny handresy ireo loza ateraky ny natiora rehefa manao ski? Jereo ny 5
Atolotra ny Profesionalan'ny ranomandry
Manolotra ho an'ny matihanina
Atolotr'ireo matihanina amin'ny oram-panala
Atolotra ho an'ny mpampianatra ski
Atolotra ho an'ny mpitaingina
Atolotra ho an'ny governora
Ski nanolotra club
© 2020 Uller. Zo rehetra voatokana